I-Arduino GPS: yendawo nokuma kwamaphrojekthi akho | Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala
I-Arduino GPS: yendawo nokuma
Nge ibhodi lokuthuthukisa I-Arduino ingenza amaphrojekthi amaningi, umkhawulo uvame ukuba umcabango. Ngefayela le- izingxenye zikagesi namamojula, ukusebenza kungangezwa ukuze ukwazi ukwenza izinto eziningi. Okunye kwalokhu kusebenza kungaba yikhono lokukwenza thola izinto noma abantu, noma thola ngokuma nge-Arduino GPS.
Lolu hlobo ukubeka nokulandela kungenziwa kusetshenziswa i-RFID noma abamukelayo njengalena esizoxoxa ngayo kulesi sihloko. Ngalokhu uzokwazi ukudala inqwaba yamaphrojekthi, kusuka emidlalweni yokwakha umtshina nokuthola izinto, ukuthola izinto ezebiwe, ukwazi ukuzitholela usebenzisa i-GPS, njll.
1 I-Arduino NEO-7 GPS Module
1.1 Ungathenga kuphi i-NEO-6 ye-Arduino GPS
2 Isibonelo no-Arduino
I-Arduino NEO-7 GPS Module
Ukuze ube ne-Arduino GPS, ungasebenzisa Amadivayisi we-NEO-6, umndeni owenziwe u-U-Blox futhi ongaxhunywa ebhodini le-Arduino ngendlela elula. Ngaphezu kwalokho, banokuxhumana okuphelele, ne-UART, SPI, I2C, kanye ne-USB, ngaphezu kokuxhasa izivumelwano ze-NMEA, UBX kanambambili ne-RTCM.
Ngaphezu kwalokho, le Arduino GPS ene-NEO-6 futhi ikuvumela ukuthi unciphise ubukhulu bephrojekthi yakho, ngoba ine usayizi omncane, kanye nezindleko eziphansi. Mayelana nokusetshenziswa, nayo incane. Uma ikumodi esebenzayo, izodinga kuphela i-37mA. Inikwe amandla yi-2.7 kuya ku-3.6V yezinhlobo ze-NEO-6Q ne-NEO-6M, kuyilapho kukhona ezinye zamandla kagesi aphansi abizwa nge-NEO-6G adinga kuphela phakathi kuka-1.75 no-2v.
Uma zihlanganiswe ku- imodyuli, izofaka i- amandla ombane okuzovumela ukuyinika amandla ngqo kusuka kuxhumano lwe-Arduino 5v.
Eminye imingcele ethokozisayo yale moduli yile:
Imizuzwana engama-30 ka- isikhathi sokushisa kubanda, futhi kusekhondi elilodwa kuphela ukuqala okushisayo.
La imvamisa yesilinganiso esiphezulu basebenza ngo-5Hz kuphela.
Ukunemba kwesikhundla kwamamitha ayi-2.5 wokuhluka.
Ukunemba kwejubane 0.1 m / s.
Ukuhluka komumo okungu-0.5º kuphela.
Ungathenga kuphi i-NEO-6 ye-Arduino GPS
Ungawathola lawa madivayisi namamojula ezitolo eziningi ezikhethekile ze-elekthronikhi, noma naku-Amazon. Isibonelo, lapha ungakwazi ithenge ngentengo ephansi kakhulu:
I-module ye-Lorsoul NEO-6M Arduino GPS
Ungafunda kabanzi ngokuhlela nge-Arduino ngezifundo zamahhala ze-PDF ongazenza landa kusuka lapha.
Into yokuqala okufanele uyenze ukuyixhuma ebhodini lakho lokuthuthuka futhi ube ne-Arduino GPS yakho ukuxhuma imodyuli yakho ye-NEO-6 ebhodini. I- ukuxhumana zenziwe zaba lula kakhulu (ukuxhumana kwe-NEO-6 module - ukuxhumana kwe-Arduino):
I-GND - GND
I-TX - RX (D4)
I-RX - TX (D3)
I-Vcc - 5V
Uma usuyixhumile, kuzofanele futhi ukuthi ulande ifayela le- Umtapo wezincwadi weSoftSerial ku-IDE yakho ye-Arduino, njengoba izodingeka ekuxhumaneni nge-serial. Kungenzeka ukuthi usunayo vele kusuka kwamanye amaphrojekthi, kepha uma kungenjalo, kuzofanele ube nayo landa bese ufaka ku-IDE yakho.
Uma lokho sekwenzile, ungaqala ngekhodi yakho elula ukwenza okufundwayo. Isibonelo, njengoba imigomo eminingana ingasetshenziswa, nanku umdwebo ye-NMEA:
Vele, ungenza ukuguqulwa kwakho noma usebenzise ezinye izivumelwano uma ufisa ... Ungasebenzisa futhi izibonelo ezitholakalayo ku-IDE yakho yalomtapo wezincwadi. Kepha, ngaphambi kokuqeda i-athikili, kufanele ukwazi lokho ifomethi ye-NMEA (INational Marine Electronics Asociation) icace kakhulu, ukuze uyiqonde, kufanele wazi syntax yayo:
$ GPRMC, hhmmss.ss, A, llll.ll, a, yyyyy, a, vv, xx, ddmmyy, mm, a * hh
Okusho ukuthi, i- $ GPRMC ilandelwa uchungechunge lwe- amapharamitha akhombisa indawo:
hhmsib.ss: yisikhathi se-UTC ngamahora, imizuzu namasekhondi.
Aisimo somamukeli, lapho i-A = OK ne-V = isexwayiso.
llll.ll, ukuze: yi-latitude, lapho u-can kungaba u-N noma u-S, enyakatho noma eningizimu.
yyyy.yy, a: ubude. Futhi i-kungaba u-E noma u-W, okungukuthi, empumalanga noma entshonalanga.
vv: ijubane ngamafindo.
xx: inkambo ngezigaba.
nngibhabhi: usuku lwe-UTC, ngezinsuku, izinyanga nonyaka.
mm, a: umehluko wamagnetic ngama-degree, kanti i-a ingaba u-E noma u-W empumalanga noma entshonalanga.
* H H: I-Checksum noma i-checksum.
Isibonelo, ungathola okuthile okufana nalokhu:
Indlela ephelele ye-athikili: Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala » I-Arduino » I-Arduino GPS: yendawo nokuma
I-eProcessor: iprosesa yokuqala yomthombo ovulekile waseYurophu idalwe eSpain
I-LibreCellular: iphrojekthi yehardware yamahhala nesoftware yokwakha inethiwekhi yakho yeselula